गोपाल श्रीमान् माफ पाऊँ । किनकि न्यायको सर्वोच्च निकाय सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशका गलत निणयका विरुद्धमा म केही शब्द लेख्दै छु ।
अगाडि श्रीमान् विशेषण लागेको व्यक्तिको निर्णयका विरुद्धमा केही शब्द लेख्दा पक्कै पनि सहज भने मलाइ हुने छैन । कहिलेकाही असहजताका बाबजुद पनि लेख्नु पर्दोरहेछ । अन्यायका विरुद्धमा लेख्दा विशेषणको पनि ख्याल गर्नहुन्न भन्ने मान्यतामा अडेको व्यक्ति भएका कारणले पनि मलाई साह्रै गाह्रो भने हुने छैन । हजुरले श्रीमान् पदको ख्याल नगरेका कारणले नै म आज यो आलेख लेख्न विवश छु ।
रत्नपार्कमा हिंड्दै गर्दा ७२ वर्षकी हजुरआमाले बाबु सर्वोच्च अदालत जाने बाटो कुन हो ? भनेर सोधेको आज पनि झलझली सम्झन्छु । कुरा गर्दै जाँदा ती हजुरआमाको ३० वर्ष अघिको मुद्दा अहिलेसम्म पनि फैसला भएको रहेनछ । सर्वोच्च अदालत धाउँदा धाउँदा करोडपति हजुरआमा अहिले रोडपति हुनुभएको रहेछ । आँखाबाट पिलिक्क आँसु झारेर अन्त्यमा एउटा वाक्य भन्नुभएको थियो, ‘बाबु म अब काशी जान्छु ।’
उहाँ त एउटा प्रतिनिधि पात्र मात्र हो । उहाँजस्ता कति मान्छे न्यायको खोजीमा काशी गए त्यो भने थाहा पाउन गाह्रो छ । गोपाल श्रीमान् के अब न्याय पाउन हामी आम नागरिकले काशीनै जानुपर्ने हो त ? गोपाल श्रीमान्, हजुरको नेतृत्वमा रहेको सर्वोच्च अदालतले गरेका केही निर्णय हेरौं ।
१२ अर्ब भ्रष्टचार गरेको भनेर नेपालका नामी पत्रपत्रिकाले लेख्दा पनि उनलाई सामान्य धरौटीमा रिहा गरियो । त्यस्तै, अरबौं भ्रष्टचार गरेको भनेका आयल निगम प्रमुख गोपाल खड्कालाई उल्टो पदबाहली गरियो । नातेदार भएकाले नहकुल सुवेदीलाई छ महिनामा तीनपटक बढुवा श्रीमान्ले नै गर्नुभयो ।
तीन करोड नेपालीको स्वास्थ्य र शिक्षामा सहज पहुँच हुनुपर्छ भनेर एउटा सन्यासी डाक्टर रात दिन नभनेर भोकभोकै लडिरहेका छन् । उनै सन्यासी डाक्टरलाई सर्वोच्च अदालतको गलत निर्णयको विरुद्धमा बोल्दा मानहानीको मुद्दा लगाएर जेल हाल्न खोजिँदै छ ।
गोपाल श्रीमान् !
हामी लोकतन्त्रमा छौं । लोकतन्त्रमा लोकतन्त्रभन्दा माथि लोकतन्त्र मात्र हुन्छ । लोकतन्त्रमा गलत निर्णयका विरुद्धमा नागरिकले खबरदारी गर्न पाउँछन् । गलत निर्णय गर्दा पनि चुपचाप लागेर सहनुपर्ने बाध्यता आयो भने त्यो लोकतन्त्र होइन । त्यो त तानाशाहीतन्त्र हो श्रीमान् । फेरी पनि भन्छु- श्रीमान्लाई भ्रम नहोस्, हामी लोकतन्त्रमा छौं ।
श्रीमान् म धारा उपधाराका कुरा धेरै जान्दिनँ तर, न्याय वा अन्याय के हो, त्यो भने म छुट्याउन सक्छु । त्यही भएर श्रीमान् तपाईले गर्नुभएको निर्णय सरासर गलत छ । यसलाई तुरुन्त सच्याउनुहोस् । म जस्ता नागरिकले काशी जाने वातावरण नबनाउनुहोस् । ढुक्कका साथ न्याय खोज्न सर्वोच्च अदालत आउन सक्ने वातावरण निर्माण गर्नुहोस् । त्यसपछि म पनि भन्छु श्रीमान् गोपालप्रसाद पराजुली ।
यसै आलेखमार्फत् म सबै न्यायप्रेमी नागरिकलाई आग्रह गर्छु कि- व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठी अन्यायका विरुद्धमा लड्नको लागि न्यायलाई छातीमा राखेर अन्याय विरुद्धको अभियानमा सरिक होऔं ।